LIISKA EEYAHA BULUUGA AH - EEYAHA
Tani waa Shaka the Siberia Husky ugu yaraan 100 rodol (45 kg). Wuxuu leeyahay dhogor cas iyo caddaan iyo indho isku eg oo buluug ah.
Boggan waxaa ku taxan noocyo ey ah oo yeelan kara indho buluug ah eyga weyn. Ey yaryar qaarkood waxay ku dhalan karaan indho buluug ah, laakiin indhuhu way madoobaanayaan marka eeygu koraan. Tani waa liistada taranka ee ku hayn kara midabkooda buluugga ah qaangaarnimada xitaa marka jaangooyada noocyadu ay u aragto inay qalad tahay. Mararka qaar eygu wuxuu yeelanayaa laba indhood oo buluug ah, ama hal indhood oo buluug ah. Isku qas eeyaha kuwaas oo leh buluug-indho buluug ah oo safafkooda ah waxay yeelan karaan indho buluug ah.
Ku Raadi Qeyb
Bulldog Mareykan ah
Dagaalyahan Mareykan ah
Isbaanish Mareykan ah
Eyga Hindida Mareykanka
Godka Dibida Maraykanka
Alapaha Blue Dhiig Bulldog
Eyga Cambodia Razorback
Eyga loo yaqaan 'Catahoula Leopard Dog'
Shepherd yar oo Australian ah
Gunta yar Ingiriisiga Bulldog
Old Sheepdog Ingiriisi ah
Toy Australian Adhijir
Boqoradda Elizabeth Pocket Beagle
'Ruby oo 2 jir ah oo bunni iyo caddaan ah Soohdinta Collie oo leh hal indhood oo buluug ah iyo il bunni ah. Waxay jeceshahay caruusadeeda Mr. Squeaks iyo kareemka la kariyay !! '
'Trixie waxay leedahay indhaha ugu qurxoon ee aan abid arko. Waxay tahay 15 lbs (6.8 kg) at 5 bilood jir iyo Terrier mix. Waxay jeceshahay inay ciyaarto oo waxay ku boodi kartaa afarta cagood hawada. Sawirkaan waxay uun ku heshay a qubeys waxaana lagu ciyaaray in ka badan 2 saacadood. Hada way ogtahay inay tahay waqtiga sariirta Waxaan korsanay iyada 4 bilood iyo badh waana iyada dheriga loo tababaray . '
Kani waa tayda Bulldog Mareykan ah loo yaqaan Sky. Waxay ku jirtaa 13 bilood sawirkaan, culeyskeeduna waa 70 rodol (31 kg.) Iyo 24 inji (61 cm) sare. Waxay u badan tahay cadaan leh hal meel oo weyn oo garabka midig ah oo ka dambeysa garabka midig iyo farabadan oo yaryar oo dhan. Waxay kaloo leedahay hal il oo buluug ah iyo hal il oo bunni ah. Dabeecaddeedu waa mid saaxiibtinimo badan oo ciyaar leh. Waxay jecel carruurta iyo eeyo kale . Markay kacsan tahay ayay dabada ka ruxmaysa dabadeeda in ka badan dabadeeda. Waxay jeceshahay inay ku seexato iyadoo madaxeeda barkin ku daboolan buste. Waxay u egtahay inay quruxsan tahay laakiin waxay u egtahay dhawaaq dheer. Caadadeeda xun ee kaliya ee hada jirta ayaa ah inay wali waxyaabo qaar calalinayso marba marka ka dambaysa. Waxay heshaa wax badan jimicsi guriga dhexdiisa oo wuxuu aadaa beerta nasashada.
'Tani waa Xaqsoor sida eey. Isagu waa ChiWeenie . Sababta ayaa ahayd labaad dhashay , sidaa awgeed magaca, Duece. Hooyadiis waa madow iyo caddaan Chihuahua aabihiisna waa midab miridh leh Dachshund . Sababta ayaa ah eey aad u baxaya. Wuxuu jecel yahay inuu salaaxo qof kasta oo qoyska ka mid ah, wuuna kugu oori doonaa si uu dareenkaaga u helo! Wuxuu indhihiisa buluuga ah kahelaa aabihiis, Sammy, iyo sanka gaaban ee ka imanaya hooyadiis, Mya. Sababta waa mid ka mid ah lix eeyo yaryar oo ka soo baxa qashinka. Waa qof jecel oo jilicsan, sida aabihiis oo kale. '
'Tani waa naagtayda 2 jirka ah, madow iyo caddaan Dalmatian oo leh hal il buluug ah iyo hal il oo bunni ah. Iyadu waa qof aad u caqli badan oo diyaar u ah inay shaqeyso oo ay wax barato, wakhti kasta. Magaceedu waa Muddy Pawz Sirta Rip Roarin. AKA 'Sir' '
Liisaska eeyaha saafiga ah oo lagu dhex daray ...
Liiska eyda isku dhafan ee isku dhafan
Liiska Eeyaha leh Afafka Madoow
Liiska eeyaha saafiga ah
A ilaa Z - Noocyada Eyga
Ku Raadi Eeyaha Nooc ahaan
Ka raadi dhammaan noocyada hal bog
Noocyada Eyga: weli lama dhisin iyo / ama heerar kala duwan oo horumar ah
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Xuduuda
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Ski-Border Dog
Aussie Shiba Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Macluumaadka iyo Sawirada Doxie Heeler Dog
Korinta Eyga: Mia the American Bully 7 toddobaad jir
Macluumaadka Noocyada eeyaha ee Ingiriisiga iyo Sawirada
Macluumaadka Taranka Eeyaha Papitese iyo Sawirada
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha ee Peke-A-Chon
chihuahua oo isku qas qasabka spaniel
Jack Russell Pit isku darka dibi god
Jack Russell isku darka hound basset
Jack apso lhasa Russell Pit isku darka
madow afka cur isku qasan eeyo